यस्तो कम्पनी, जसले २ हजार व्यक्तिलाई रातारात करोडपति बनाइदियो !!
काठमाण्डौ । आफ्नो व्यवसायबाट मानिस रातारात करोडपति भएको त सुन्नुभएकै होला । तर, आज हामी तपाईंलाई यस्तो कम्पनीको बिषयमा बताउन गइरहेका छौ, जो आफैं पनि करिब ३ लाख करोड रुपैयाँ कुल सम्पत्तिको कम्पनी बन्न सफल भएको छ र यसले आफूसँग जोडिएका २ हजार व्यक्तिलाई करोडपति बनाइदिएको छ । त्यस्तो कम्पनी हो चिनको निकै चर्चित र ठूलो इकमर्स कम्पनी अलीबाबाको...
उर्जित पटेल बने आरबीआईका २४ औं गभर्नर, मुद्रास्फिति र आर्थिक वृद्धिदरलाई सन्तुलनमा राख्ने विश्वास
काठमाण्डौ । भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्ब बैंक अफ इण्डिया(आरबिआई)का डेपुटी गभर्नर उर्जित पटेल नयाँ गभर्नर बनेका छन् । तत्कालीन गभर्नर रघुराम राजनको कार्यकाल सकिएपछि चम्कदै गएको भारतीय अर्थतन्त्रलाई अझ माथि लैजाने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीको बोझ बोक्ने आरबीआईको संभावित गभर्नरको बिषय राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रुपमै चर्चाको बिषय बनेको...
सबैभन्दा धेरै तलब बुझ्ने विश्वका १० नेताहरु, ओबामा चौथो नम्बरमा
काठमाण्डौ । सबैभन्दा शक्तिशाली देशको राष्ट्रपति भए पनि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामाको तलब विश्वका अन्य राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको भन्दा कम छ । अमेरिकाको एक फाइनान्सियल न्यूज साइटले सन् २०१६ का लागि विश्वमा सबैभन्दा धेरै तलब थाप्ने टप १० नेताहरुको सूचि सार्वजनिक गरेको छ । यो सूचिमा सबैभन्दा धेरै तलब पाउने नेतामा सिंगापुरका...
यी हुन् विश्वकै धनी बिल गेट्सका २० दुर्लभ तस्विर, स्कूल पढ्दै कमाएका थिए ४२ सय डलर
काठमाण्डौ । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सफ्टवेयर कम्पनी माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्सको नाम नजान्ने कोही नहोला । तपाईंले विभिन्न मिडियाहरुमार्फत बेल गेट्सको नाम निकै सुनेको वा पढेको हुनुपर्छ । तर आज तपाईंलाई हामी विश्वकै धनी बिल गेट्सको २० फोटोहरुको माध्यमबाट उनको जीवनयात्राको सचित्र जानकारी दिन गइरहेका छौ । बिल गेट्सका छानिएका यति...
साउदी अरबमा विदेशी कामदारको दर्दनाक कथा, ८ महिनादेखि भोकैप्यासै, घर फर्किन खोज्दा पासपोर्ट गायब !
काठमाण्डौ । तेल खानीका कारण मालामाल साउदी अरब विश्वभरका लाखौं कामदारका लागि एक आकर्षक गन्तव्य हो । तर हिजोआज यो देशमा लाखौं विदेशी कामदार तथा मजदूरहरु अलपत्र छन् । नेपालका समेत सयौं कामदार कामविहीन अवस्थामा भोकभोकै परेका गुनासाहरु सम्बन्धित दूतावासमा आउन थालेका छन् । बीबीसीका अनुसार साउदी अरबमा हाल करिब १० हजार व्यक्ति बेरोजगार...
कमजोरी पत्ता लगाउनेलाई २ करोड बढी नगद दिने एप्पलको घोषणा
काठमाण्डौ । यदि तपाईं आइटी क्षेत्रमा पोख्त हुनुहुन्छ र कमजोरीहरु खोतल्ने राम्रो ज्ञान छ भने घरमै बसी बसी दुई करोड बढी आम्दानी गर्ने अवसर आएको छ । तर यसका लागि तपाई इथिकल ह्याकर(कानूनी ह्याकर) हुन आवश्यक छ । विश्वकै सबैभन्दा प्रतिष्ठित कम्पनी एप्पलले आइफोनको कमजोरी पत्ता लगाउनेलाई यति ठूलो रकम दिने पहिलो पटक घोषणा गरेको हो । मिडिया...
अब घरमै बसेर फेसबुकबाट पैसा कमाउन सकिने ! यी हुन् तरिका
काठमाण्डौ । यो समयमा फेसबुक नचलाउने को होला र ? हिजोआज फेसबुकलाई आफ्ना गतिविधि पोस्ट गर्न, आफन्त तथा साथीभाईसँग च्याट गर्न, भिडियो अपलोड गर्न प्रयोग गरिन्छ । युवाहरुलाई समय बिताउनका लागि यो निकै राम्रो प्लेटफर्म पनि बनेको छ । तर फेसबुकका गुणहरु यतिमा मात्र सीमित छैनन्, यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने फेसबुकबाट आम्दानी पनि गर्न सक्नुहुन्छ ।...
बेइजिङ (चीन) । चीन सरकारले गलत आचरण फैलाएको आरोपमा सन् २०१६ मा करिब तीन हजार ६१२ वेबसाइटलाई बन्द गराएको छ । यीमध्ये ८११ वेबसाइटले अश्लिल गतिविधिलाई फैलाउने काम गरेको चीनले बताएको छ । बितेका छ महिनामा यौन उत्तेजना गराउने खालका करिब पाँच लाख २९ हजार र अहितकर सूचना फैलाउन आठ लाख ६९ हजार फोटो भिडियोलगायतका दृश्यलाई हटाइएको पनि चीनको...
जिएसटी विधेयक : भारतको अहिलेसम्मकै ठूलो कर सुधारको प्रयास, गेम चेञ्जिङ हुने विश्वास
►शिल्पा कन्नन नयाँदिल्ली । भारतीय बित्तमन्त्री अरुण जेट्लीले बुधबार राज्यसभामा वस्तु एवम् सेवा कर(जिएसटी) विधेयक पेश गरेका छन् । जिएसटी बिधेयकलाई त्यहाँको लोकसभाले पहिला नै पारित गरिसकेको छ । राज्यसभामा पनि यो पारित हुने अधिक संभावना छ । यो पारित भएपछि जुन कानून अस्तित्वमा आउनेछ, त्यसले भारतको कर व्यवस्थालाई पूरा रुपले परिवर्तन...
काठमाण्डौ । दक्षिण एशियामै नेपालका किसानहरुको अवस्था निकै नाजुक छ । उनीहरुको प्रति व्यक्ति आय, उनीहरुले उब्जाएको बालीनाली तथा अन्नपातको बजार लगायतको हिसाबले यहाँका किसानहरु दिनहुँ गरीब बन्दै गएका छन् । कृषिप्रधान देश भए पनि सरकारले किसानमैत्री नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न नसक्दा कृषि कर्मप्रति नै बिकर्षण पैदा भइरहेको छ, यसले समग्र...
भेराइजन(Verizon)ले याहूसँग गरेको खरीद डिलको औपचारिक घोषणा
काठमाण्डौ । विश्वकै ठूलोमध्येको एक सर्च इञ्जिन कम्पनी याहू अन्ततः बिक्री भएको छ । भेराइजन कम्युनिकेशन्सले करिब ५६ हजार करोड रुपैयाँमा याहूको मुख्य बिजिनेश खरीद सम्बन्धी सम्झौता गरेको सोमबार औपचारिक घोषणा गरेको हो । याहुले पछिल्लो केही वर्षदेखि फेसबुक र गुगलबाट निकै कडा टक्कर व्यहोरिरहेको थियो । यति मात्र होइन, फेसबुक र गुगल जस्ता...
फेसबुक र गुगलसँग प्रतिस्पर्धामा पछि परेपछि याहू बिक्री गर्ने तयारी
काठमाण्डौ । विश्वकै ठूलोमध्येको एक सर्च इञ्जिन कम्पनी याहू बिक्री हुने भएको छ । भेराइजन कम्युनिकेशन्सले करिब ५६ हजार करोड रुपैयाँमा याहूको मुख्य बिजिनेश खरीद गर्न लागेको हो । याहुले पछिल्लो केही वर्षदेखि फेसबुक र गुगलबाट निकै कडा टक्कर व्यहोरिरहेको थियो । यति मात्र होइन, फेसबुक र गुगल जस्ता कम्पनीका कारण याहुले निकै ठूलो घाटा समेत...
आइएमएफको नयाँ प्रक्षेपणले भारतलाई झट्का !
काठमाण्डौ । इन्टरनेशनल मनिटरी फण्ड(आइएमएफ)ले भारतलाई निकै ठूलो झट्का दिएको छ । आइएमएफले आर्थिक वर्ष २०१६/१७ मा भारतको कुल जीडीपीलाई घटाएर उसलाई निकै ठूलो झट्का दिएको हो । भारतको पहिला अनुमानित जीडीपी ग्रोथ ७.५ रहेकोमा आइएमएफले यसलाई घटाएर ७.४ प्रतिशतमा झारिदिएको हो । आइएमफले भारतको प्रक्षेपित वृद्धिदरमा गिरावट आउनुको कारणमा लगानीमा...
पेट्रोलियम मूल्य अझै घट्नसक्ने, यस्ता छन् कारण
काठमाण्डौ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा ठूलो गिरावट आउनसक्ने देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार विश्लेषकहरुले कच्चा तेलको बढ्दो मूल्यमा गिरावट आउनसक्ने प्रक्षेपणहरु सार्वजनिक गर्दै यसले नेपालजस्तो देशमा समेत प्रभाव पर्ने र पेट्रोलियम मूल्य अझ तल झर्नसक्ने बताएका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कच्चा तेलको उत्खनन् अचाक्ली...
अफ्रिकामा सुन खोज्नेहरुको हृदयविदारक कथा, जहाँ ४ सय बढीले ज्यान गुमाइसके
काठमाण्डौ । सुन देख्दा जति चमकदार र आकर्षक हुन्छ, अफ्रिकाको खानीबाट निकाल्ने कथा उत्तिकै कालो र डरलाग्दो छ । अस्ट्रेलिया र क्यानडा जस्ता देशमा आधुनिक तरिकाले सुनको उत्खनन् हुने गरे पनि अफ्रिकामा भने आज पनि पुरातन तरिकाबाटै सुन उत्खनन् गर्ने चलन छ । अफ्रिकी देशमा सुनको खानी निकै गहिरो, डरलाग्दो र खतरनाक हुन्छ । यहाँका मानिस मरुभूमिमा समेत...